Published on Home Forward (http://hapdx.org)
Home Forward waxay siiyaan doorashooyin guryo kala duwan oo qiimo jaban leh dadka degan Magaalooyinka Portland, Gresham, Fairview, Troutdale, iyo dhamaanba degmooyinka Multnomah County. Waxaa aynu doonayna inaanu siino guryo nabadgelyo iyo qiimo fiican leh dadka dhibaatada ku qaba daqliga, curyaanimada ama leh baahida qaaska ah.
Home Forward waxay bixiyaan in ka badan 6,000 oo abartment oo ijaar ah, oo ay ku jiraan 2,600 oo guri oo ah kuwa dadweynaha, iyo qiyaastii 8,700 oo ah waraaqaha (vouchers) caawinaada ijaarka ee Section 8. Guryaheenu waxay diyaar u yihiiin shaqsiyaadka, qoysaska, dadka curyaanimadu hayso ama dadka baahida qaaska ah leh iyo dadka waayeelka ah ee soo buuxiya sharuudaha xadka daqliga ee barnaamijyada kala duwan. Waxaa intaas dheer in, hayado la shaqeeyaan Home Forward ah in ka badan 100 hayadood oo ah kuwa bulshada, kuwo aan faa’iido doon ahayn iyo hayado shaqsiyaan ah. Hayadahaasi waxay bixiyaan adeegyada dhaqaalaha, waxbarashada, barnaamijyada ka hortaga muqadaraadka iyo kuwa dhalinyarada, tababaro shaqo iyo xirfadaha nolosha.
Caawinaad qadka telefoonka oo luqadaada ah, fadlan waxaad ka soo wacda (503) 802-8521 iyo u dhaaf magacaada iyo lambarka telefoonkaada. Shaqalaha ayaa telefoonkaada uga soo jawaabi doona labo casho oo shaqo gudahood.
Guryaha Ama ABartmentiga Bulshada
Home Forward waxay leeyihiin guryo ama abartmentiyo bulsho oo ku kala yaal dhamaanba degaanada degmooyinka Multnomah County kuwaaso uu ijaarkoodu ka hooseeyo beeca suuqa. Guryahaasi waxay iskugu jiraan guro hal qol ah ilaa iyo kuwo shan qol ah (five-bedroom townhouses). Inta badan guryahaas waxaa maamula hayado shaqsiyaan ah oo ay kor kala socdaan Home Forward.
Guryaha qaarkood waa kuwa bulshada, oo ay si toos ah lacagtooda u bixiso (subsidized) Wasaarada Guryaha iyo Horumarinta Maagalooyinka ee U.S.( U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) ) oo ayna maamulaan Home Forward. Qiimaha ijaarka ee guryaha bulshadu waxaa uu ku saleeysan yahay qiyaastii 30 boqolkiiba daqliga qoyska soo gala.
Doorashooyinka guryaheena oo ku qoran luqada Engiiska si aad u aragto, halkaan riix .
Barnaamijka caawinaada ijaarka ee Home Forward Section 8 waxa uu u ogolaanaya dadka degen degaanka ee daqligoodu hooseeyo inay iskaga bixiyaan ijaarka guryaha dadka shaqsiyaanka ee u qalma ee aqbala ama qaata waraaqaha (vouchers) caawinaada ijaarka. Dadka ka qeyb gala barnaamijkaas waxay ku heshiinaan ijaarkooda, ka dibna Home Forward ayaa ka bixiya qeyb ka mid ah ijaarka bishiiba, taasoo ku saleeysan daqliga iyo tirada qoyska. Home Forward waxay kaloo ka caawinaayn ama kala shaqeeyn noocyo kale oo caawinaada ijaarka hayadaha kale ee la shaqeeya, oo ay ku jiraan caawinaada mudada gaaban ee ijaarka, caawinaada dadka curyaamiiinta ah ee ijaarta guryaha, iyo caawinaada waaweelka ciidamada qalabka sida (military veterans).
Warbixinta caawinaada ijaarka oo ku qoran luqada Engiiska si aad u aragto, halkaan riix .
Home Forward waxay bixiyaan wax ka badan Hoy. Waxaanu og nahay inay dhibaato ka timaado mararka qaarkood daqli yarida, curyaanimada ama dadka qaba baahida qaaska ah, dhibaatooyinkaasina kuma ay eka oo kaliya helitaanka guryaha. Dadka degan guryaheenu waxay raadinayaan waxbarasho, xornimo iyo caawinaad si ay si wanaagsan uga dhax muuqdaan una noqdaan xubno wanaagsan oo bulshada ka tirsan. Adeegyada Home Forward waxaa loogu talo galay inay soo buuxiyaan baahida dadka degan guryaha.
Warbixinta adeegyadeena caawinaada oo ku qoran luqada Engiiska si aad u hesho, halkaan riix .
Source URL: http://hapdx.org/somali